02 ပလက်ဖောင်းပေါ်မော်ကွန်း - ထို rayhab
MEA Group မှဆောက်လုပ်ရေး, စက်မှုလုပ်ငန်း, အစားအစာ, စွမ်းအင်, ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြောင်းအဆင့်မြင့်နည်းပညာထုတ်ကုန်များကိုကဏ္ဍတူရကီရဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာရည်ညွှန်းတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ အုပ်စု Mee, နိုင်ငံတကာဖြန့်ဝေကိုဖန်ဆင်းသောအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူအဓိကစီမံကိန်းများတွင်တည်ရှိသောပေမယ့် [ပို ... ]
အစိတ်အပိုင်း Consulting & ဆောက်လုပ်ရေးခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလီမိတက်ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးရရှိပြီး operating လွတ်လပ်သောအင်ဂျင်နီယာအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကုမ္ပဏီအရည်အသွေးပေါ်လစီသာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှဖြစ်လာမှစုစုပေါင်းအရည်အသွေးကို [ပို ... ]
အတူလုပ်ကိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ 2006 "ရှည်လျား-line ကို" ချိန် မှစ. ကုမ္ပဏီနှင့် "ဝိုင်းလေး" စနစ်ကကွန်ကရစ်အိပ်ပျော်စက်ရုံများ prestressed ကွန်ကရစ်ပာဘို့မှိုထုတ်လုပ်တယ်။ တိုတောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ turnkey အဆောက်အကွန်ကရစ်ပာဖို့စွမ်းရည်တည်ထောင်ရန်ဂျာမန်မိတ်ဖက်များ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ၎င်း၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးတိုးချဲ့ [ပို ... ]
SÜTEKလျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုစနစ်များမေလ 2011 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ဆည်မြောင်းရေကန်၏အဓိကလှုပ်ရှားမှု, သစ်တော, ရေပေါက်တွေ, ကန်များနှင့်ပွင့်လင်းလိုင်းများ Lineflex EPDM geomembrane နှင့်အတူ coated နဲ့ထို့ကြောင့်ရေကိုတံဆိပ်ခတ်နေသည်မီး။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် [ပို ... ]
ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီလျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာများ 2005 နှစ်ပေါင်းချုပ်ဝင်လျှပ်စစ်အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသော။ SUN ။ TAAH ။ SAN ။ နေကြပါပြီ။ , LTD ။ ADANA နယူးစက်မှုဇုန်ဧရိယာမြင်း Bodyshop ဝက်ဘ်ဆိုက်3အဖြစ်ကာလသား။ Blok အဘယ်သူမျှမ: 20 / F ကိုလိပ်စာစစ်ဆင်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ထံမှ 2005 နှစ်ပေါင်း [ပို ... ]
SPE ဒါကြောင့်အပေါ်ကျန်းမာရေး, ပညာရေး, ခရီးသွားလုပ်ငန်း, စက်မှုလုပ်ငန်း, ရုံး, အိမ်ရာ, လူမှုရေးအဆောက်အဦးများနှင့်။ အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်အဆောက်အဦးများနှင့်အဆောက်အဦးများအဘို့ယေဘုယျ layout ကိုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ဗိသုကာ, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, Electro-စက်မှု, Landscaping, access ကိုလမ်းများနှင့်ဒီဇိုင်း, ဆောက်လုပ်ရေးကြီးကြပ်မှုနှင့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏အခြေခံအဆောက်အဦများ [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: 5, Rue d'Altkirch FR - 68000 Colmar ဖုန်းနံပါတ်: + 33-3 / 83 80 22 11 ဖက်စ်: + 33-3 / 89 79 78 45 E-Mail က: l.ıfrah@geismar.coအင်တာနက်ကို http: / 6.3.22 /www.geismar.co လမ်းမကြီး-ရထားလမ်းယာဉ်များအကျိုးစီးပွားနှင့်အခြားအလားတူမီးရထားသတင်းများ haberlerets Spoor BV ၏ဖြစ်နိုင်သည် [ပို ... ]
အဆိုပါ Karakoy Bolt ကသင်္ဘောကျင်း CAD အတွက် SV ​​Spa တူရကီကိုယ်စားလှယ်အင်ပါယာ။ Ziyal Sok က။ အမှတ် 5-Karaköy, အစ္စတန်ဘူလ်လျ: + 90 212 255 11 00 90 212 237 22 37 + ဖက်စ်: + မိုဘိုင်း 90 212 253 30 80: 0532 586 27 [ပို ... ]
အဆိုပါ 1998 Tezisler ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီနှင့် Semih ဆီးမိုက်ခုနှစ်တွင် Ostim အားဖြင့်ခံစားချက်တွေကို cable ကိုဗန်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကိုတင်သောပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်စက်မှုဇုန်များဖွဲ့စည်းသူ trailers များထုတ်လုပ်အတူသူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး roller ၏ PTT က, Tek, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, Cable ကို-TV ကိုထုတ်လွှင့်လိုင်း, [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: စက်မှုပန်းခြံ, Xinjin, ချန်ဒူး, စီချွမ် CN - 611430 ချန်ဒူးဖုန်းနံပါတ်: + 86-28 / 85 55 69 68 ဖက်စ်: + 86-28 / 82 55 69 89 E-Mail က: အင်တာနက်ကို vendition@xinzhu.co http: / အလားတူ /www.xinzhu.co အကျိုးစီးပွားမီးရထားသတင်းများနှင့်အခြားလျှပ်စစ်စက် haberlerzhejiang Jinz ၏ဖြစ်နိုင်သည် [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: အဆိုပါ Qijichang စက်ရုံတံခါးဝ CN ရဲ့မြောက်ပိုင်း၏တောင်ပိုင်း - 213011 Changzhou ဖုန်းနံပါတ်: + 86-519 / 85 05 25 92 ဖက်စ်: + 86-519 / 88 35 42 39 E-Mail က: czkygs@xnumx.co အင်တာနက်ကို http: //www.czkxzb.co ဆက်သွယ်ရန်: Frau ပူးစက်မှုဥယျာဉ်အလားတူ 126 [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: Beisenst ။ DE-39 41 - 45964 Gladbeck ဖုန်းနံပါတ်: ။ + 49-2043 / 48 11-0 ဖက်စ်: + 49-2043 / 48 11-20 E-Mail က: မေးလ် @ CFT-GmbH ကအင်တာနက်မှာ http: //www.cft- GmbH အတွက်ဆက်သွယ်ပါ။ Herr Jürgen Baumann အလားတူမီးရထားသတင်းနှင့် B-mAX ဦးပိုင် GmbH သည် 21 / 12 / 2010 လိပ်စာမှအကျိုးစီးပွားဖြစ်အံ့သောငှါကတခြားသတင်း: Flurstr ။ [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: Ignaz-Koeck-str ။ 19 ကို AT - 1210 ဗီယင်နာဖုန်းနံပါတ်: + 43-1 / 90 199-0 ဖက်စ်: + 43-1 / 90 199-19 E-Mail က: အင်တာနက်ကို office@centersystems.co: Frau: ငါဆက်သွယ်ပါ http://www.centersystems.co ဒစ်ဂျစ်တယ်ရေဒီယိုစနစ်များ Verena Lipphard 8.4.1 8.4.5 8.9.3 ရထားရေဒီယိုစနစ်များသည်ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်စနစ်များ (CCTV) 11.6.1 [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: Ihringer Landstr ။ DE3- 79206 Breisach နံနက် Rhein ဖုန်းနံပါတ်: + 49-7667 / 90 59 31 ဖက်စ်: + 49-7667 / 90 59 59 E-Mail က: ငါဆက်သွယ်ပါ pierre.schwarz@cemafer.co: Herr Schwarz Pierre ၏ 6.3.20 6.3.22 ပြောင်းလဲမည်စစ်ဆေးခြင်းစနစ်များ Road- အလားတူရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်များနှင့်ရထားလမ်းသတင်းများ [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: 10 Avenue du Stade de France FR - 93200 Saint-Denis ဖုန်းနံပါတ်: + 33-1 / 58 69 40 00 E-Mail က: direction.communication@cegelec.co အငျတာနကျ: ငါဆက်သွယ်ပါ http://www.cegelec.co: Herr Zdenek Vytous 3.2.49 3.2.51 converter ပြောင်းပြန်လှန်အကျိုးစီးပွားနှင့်အခြားအလားတူရထားသတင်းဖြစ်နိုင်သည် [ပို ... ]
CDP Bharat Forge ရဲ့ GmbH သည်
နေရပ်လိပ်စာ: Mittelstraße DE 64 - 58256 Ennepetal ဖုန်းနံပါတ်: + 49-2333 /796-300 ဖက်စ်: + 49-2333 /796-413 E-Mail က: cdp-railsystems cdp @ အင်တာနက်ကိုမှာ http: //www.cdp ။ -bharatforge အတွက်ဆက်သွယ်ပါ။ Herr ဖရန့် Bornscheuer ရထားစွဲစေကိရိယာများ 6.5.40 6.5.52 အမှတ် (switches များ) နှင့် switches များအဘို့အဖြတ် 6.5.57 လျှာလိပ် [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: BA ဘွဲ့ Reutenbeek 9-11 - 3090 Overijse ဖုန်းနံပါတ်: + 32-2 /687 79 07 ဖက်စ်: + 32-2 /687 35 52 E-Mail က: general@cdm.e အင်တာနက်ကို http: //www.cdm .eu ဆက်သွယ်ရန်: Mass-နွေ-စနစ်များဆင်တူ Frau Stephanie Carels Track အိပ်ရာစနစ်များ 6.5.21 6.5.23 6.5.31 Tracker စနစ်များ [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: 10-20 က AVI ဂျင်းJaurés FR - 92220 Bagneux ဖုန်းနံပါတ်: + 33-142 / 31 46 00 ဖက်စ်: + 33-142 / 31 46 31 E-Mail က: diropen@catuelec.co အင်တာနက်ကို http: //www.catuelec .com ကိုဆက်သွယ်ရန်: Frau Pascal မျိုးရိုးဗီဇ 7.7.6 အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအင်ဂျင်နီယာ
Cattron-THEIMEG ဥရောပ GmbH သည် Co. , KG KG
နေရပ်လိပ်စာ: Krefelder str ။ DE-423 425 - 41066 Monchengladbach ဖုန်းနံပါတ်: + 49-2161 / 63 63-0 ဖက်စ်: + 49-2161 / 63 63-100 E-Mail က: theimeg @ အချက်အလက်အင်တာနက်ကိုမှာ http: //www.cattron-theimeg ။ ။ က de ဆက်သွယ်ရန်: Herr အမ် Pohl တူရကီကိုယ်စားလှယ်: VISA crane Ikitelli ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံ Duty သတ္တုစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုက်ကို [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: Casio-Platz DE 1 - 22848 Norderstedt ဖုန်းနံပါတ်: + 49-40 /528 65-407 ဖက်စ်: + 49-40 /528 65-424 E-Mail က: Casio @ ဖြေရှင်းချက်အင်တာနက်ကို http: // www ။ ငါ .casio-bxnumxb.co ဆက်သွယ်ရန်: Herr Jorge Hollerith
Calenberg Ingenieure GmbH သည်
နေရပ်လိပ်စာ: Am Knübel DE 2-4 - 31020 Salzhemmendorf ဖုန်းနံပါတ်: + 49-5153 / 94 00-0 ဖက်စ်: + 49-5153 / 94 00-49 E-Mail က: calenberg-ingenieure @ အချက်အလက်အင်တာနက်ကို http: // ။ www.calenberg-ingenieure အတွက်ဆက်သွယ်ပါ။ Frau Marita Pirk အိပ်ရာ Tracker စနစ်များ 6.5.21 6.5.31 6.5.36 Mass-နွေ-စနစ်များဆူညံသံတုန်ခါမှုအထီးကျန်ထားခြင်း 6.5.46 6.5.48 deadening [ပို ... ]
Bildverarbeitungssyst GmbH သည် bvsys
နေရပ်လိပ်စာ:2မှ DE Buschhöh - 28357 Bremen ဖုန်းနံပါတ်: + 49-421 / 46 04 61-0 ဖက်စ်: + 49-421 / 46 04 61-20 E-Mail က: bvsys @ အချက်အလက်အင်တာနက်ကိုမှာ http: //www.bvsys ။ ။ တစ်ဦးကိုဆက်သွယ်ရန်: Herr Arndt-ခရစ်ယာန် Voss 6.3.22 လမ်းမကြီး-ရထားလမ်းယာဉ်များအလားတူမီးရထားသတင်းနှင့် B-mAX မှအကျိုးစီးပွားဖြစ်အံ့သောငှါကတခြားသတင်း [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: Lise-Meitner-str ။ DE-59- 42119 Wuppertal ဖုန်းနံပါတ်: + 49-202 / 94 22 620ဖက်စ်: + 49-202 / 94 22 62 22 E-Mail က: info@bustec.e အင်တာနက်ကို http: //www.bustec.e ဆက်သွယ်ပါ တိုင်း Andreas Wagner အလားတူမီးရထားသတင်းနှင့် B-mAX ဦးပိုင်မှအကျိုးစီးပွားဖြစ်အံ့သောငှါကတခြားသတင်း [ပို ... ]
Burke MOBATIME GmbH သည်
နေရပ်လိပ်စာ: DE Steinkirchring 46 - 78056 VS-Schwenningen ဖုန်းနံပါတ်: ။ + 49-7720 / 85 35-0 ဖက်စ်: + 49-7720 / 85 35-11 E-Mail က: buerk @ buerk-mobatime အင်တာနက်ကို http: // www In-mobatime .buerk ဆက်သွယ်ပါ။ Herr Armin Seeger အလားတူမီးရထားသတင်းနှင့် B-mAX ဦးပိုင် GmbH သည် 21 / 12 / 2010 လိပ်စာမှအကျိုးစီးပွားဖြစ်အံ့သောငှါကတခြားသတင်း: Flurstr ။ [ပို ... ]
ဗျူရို VERITAS GROUP
နေရပ်လိပ်စာ: 67 / 71 Boulevard du Château FR - 92571 Neuilly / Seine ဖုန်းနံပါတ်: + 33-155 / 24 70 00 ဖက်စ်: + 33-155 / 24 70 36 E-Mail က: serge.joseph@fr.bureauveritas.co အငျတာနကျ: http : ငါဆက်သွယ်ပါ //www.bureauveritas.co: Herr ရစ်ချတ်ဘား-Canavaggio 10.2.1 ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတိုင်ပင်ခံ 10.2.17 11.7.4 11.7.12 လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးတဲ့ Expert [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: Hohe Loog အဆိုပါ 2-8 DE - 26180 Rastede ဖုန်းနံပါတ်: + 49-4402 /975-0 ဖက်စ်: + 49-4402 /975-300 E-mail ကို: // www: အင်တာနက် gelcoatplus @ buefa .: http ၌တည်၏။ buefa အတွက်ဆက်သွယ်ပါ။ Frau Birte ဗွန်အက်ဆင်းမီးရထားသတင်းနှင့်အလားတူအခြားအ haberlerihal သတိပြုပါစိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်: အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှု [ပို ... ]
BST-Brandschutztechnik GmbH သည်Döpfl
နေရပ်လိပ်စာ: အဲလ်ဘတ်-Schweitzer-ဓာတ်ငွေ့ xnumxc EC -6WIEN ဖုန်းနံပါတ်: + 1140-43 / 1970-97 ဖက်စ်: + 0-43 / 1970-97 E-Mail က: အင်တာနက်ကို office@bst.co.at: http : //www.bst-firestop.co ဆက်သွယ်ရန်: Herr မာတင် Uhlig ထုတ်ကုန်အုပ်စုတစ်စုပြောင်းလဲမည်ပုံးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း 18 3.2.37 6.5.47 မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအင်ဂျင်နီယာ [ပို ... ]
BSB Saugbagger Zweiwegetechnik Stefan Matt GmbH သည် und Co. , KG
နေရပ်လိပ်စာ: Vulkanst ။ DE 13 - 10367 ဘာလင်ဖုန်းနံပါတ်: + 49-30 / 8 09 25 85-40 ဖက်စ်: + 49-30 / 8 09 25 85-49 E-Mail က: မေးလ် @ saugbagger-betriebe အင်တာနက်ကို http: // www ။ ။ saugenxnumx အတွက်ဆက်သွယ်ပါ။ Frau Nora Walter ဟာလမ်းမကြီး-ရထားလမ်းယာဉ်များ 24 6.3.22 စက်များနှင့်စနစ်များလမ်းကြောင်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက် [ပို ... ]
B က + S ကို GmbH သည်
နေရပ်လိပ်စာ: Kanalstr ။ DE 63 - 48432 Rheine ဖုန်းနံပါတ်: + 49-5971 /791 13-0 ဖက်စ်: + 49-5971 /791 13-19 E-Mail က: info@bs-baumaschinen.co အင်တာနက်ကို http: //www.bs- ငါဆက်သွယ်ပါ baumaschinen.co: Herr Carsten မိန်း 6.5.45 ရထားလမ်းဆက်ဆံရေး (ပာ) Related ရထားသတင်းနှင့်အကျိုးစီးပွားဖြစ်မည်အကြောင်းကတခြားသတင်း [ပို ... ]